गठबन्धन न सठबन्धन अाफ्नै चिन्ह जिन्दावाद ! | परिसंवाद
गफाष्टक शनिबार, चैत्र १९, २०७८ मा प्रकाशित
हेर सण्डे ! समय बलवान हुन्छ । कुनै समय थियो हाम्रो पार्टी माअोवादीका नेता कार्जेकर्ताका अगाडि उभिएर यो गाउँका मान्छे बोल्न सक्तैन थे । अहिले पाखुरा सुर्किएर तथानाम भन्छन् । हिजोकै कुरा हो एक्लै भा पनि चुनाउका बारेमा छलफल गर्नु पर्यो भनेर ढुकुरेतिर गाको त लौ `तिम्रो माअोवादीलाई भोट नदिने´ पो भन्छन् । मैले हाम्रो पार्टीका महान सर्वहारावादी राष्ट्रनायक नेता काम्रेड प्रचन्नले गर्दा यो राष्ट्र रहेको हो, गनतन्त्र अाको हो, जातीयता मौलाएको हो, प्रदेश सरखार बनेको हो भनेको त अरु त अरु गौथलीलेसमेत झन्नै कुटी । अब गठबन्धन हुने भएपछि गाउँ पालिकाको अध्यक्ष मैलेनै उठ्नु पर्ने भयो । कांगेसले भोट खन्याएपछि सजिलै जितेर पाँच वर्ष शासन गर्छु । अरु त हेरेको हेरै हुने भए।
नमस्कार है विध्वंसे काका ! को हेरेको हेरै हुने भए भनेको ? नसक्नेहरू हेरेरै चित्त बुझाउछन् सक्नेहरू प्रगति पथमा लम्की रहन्छन ।
यो भिरघरे कुरै नबुझी बोल्छ । अब पानदले गठबन्धन मिलेर उठ्ने भए । निर्नय भै सक्यो । गाउँमा जुन दलको वरिष्ठ नेता छ चुनाउमा टिकस् उसैले पाम्ने हो । यो गाउँ पालिकामा पानदले गठबन्धन भित्रको उम्दा नेता खोज्नु पर्दा म बाहेक कोही छैन । टिकस् मैले नै पाम्ने हो । अनि अरु पार्टीकाहरू त हेरेको हेरै हुने भए भनेको ।
हेर काका ! तिमी मनको लड्डु खाई बस । यो गाउँपालिकामा सण्डेको एमाले र हाम्रो कांग्रेस मात्रै छ । तिमी बाहेक यो गाउँपालिकामा माअोवादीको एकजना कार्जेकर्ता पनि छैन । तिम्रै घरमा झुम्री काकीले पनि तिमीलाई भोट दिनन्न् । हिजै जिल्ला सदरमुकामबाट फुन गरेर हाम्रो जिल्ला सभापतिले `तिमीले अध्यक्षमा उठ्नु पर्ने भयो तयारी गर्नु´ भनेर मलाई निर्देशन दिइसके । हेर काका ! भिरघरे बोलेपछि बोल्यो बोल्यो पानदलेले तिमीलाई नै टिकस् दियो भने रुखमा छाप हान्नेहर्ले भोट दिदैन । म स्वतन्त्र उठेर पनि गाउँपालिका अध्यक्षमा चुनाउ जित्छु । एमालेसँग टक्कर लिने म बाहेक यो गाउँमा अर्को जन्मेको छैन ।
तँ स्वतन्त्र उठिस भने एमालेलाई टिको लगार बुझाई दिए पनि हुन्छ । निहुँ नखोज भिरघरे ! यो पल्ट सर्लक्क मलाई छाडी दे । अर्को पल्ट म तँलाई सघाउने छदै छु । प्रधानमन्त्री देउवाले नै `पानदल मिल्दा पनि एमालेलाई हराउन गाह्रो छ´ भनी सके । हुन पनि हो एमाले कमजोर हुन्छ होला भनेको तर भएन । झन दह्रो, झन संगठित, झन विस्तारित र झन खाइलाग्दो बन्दै गएको छ । पानदले गठबन्धनलाई पनि चितवन-पोखरातिर एमालेले धर्नासो खुस्किन गरी हान्छ भन्दैछन् । कि कसो सण्डे ?
काकाले पछिल्लो कुरो चाहिँ ठिकै गरे । पानदले मात्र होइन, निर्वाचन अायोगमा दर्ता भए जति सप्पै दल मिलेर अाए पनि एमाले एक्लैले पाहा पछारे जसरी पछार्छ । संगठन, कार्जेकर्ताको खटाइ, एमाले प्रति जनताको अाकर्षण र पार्टी प्रवेशको लहरले नै चुनावी नतिजाको संकेत गरी सकेको छ । पोखरा चितवन मात्र होइन पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म एमालेले जित्ने रिपोर्ट प्रधानमन्त्री देउवा र रामचन्द्र पौडेललाई सरखारी निकायले दिइसकेका छन् । तिम्रा काम्रेड प्रचन्न र माधवलाई पनि यो कुरा थाहा भैसकेको छ । त्यसैले त उनारू पानी पानी बाहिरको माछो जस्तो भएर छटपटाई रहेकाछन् ।
सण्डे भाइले कुरो ठिक ठिकै गर्यो । पानदले गठबन्धन भए पनि हाम्रो कांग्रेस र एमाले बीचमै चुनाउ हुने हो । प्रचन्न, बाबुराम, माधवका दल भनेका च्याँखे थाप्ने रमिता हेर्ने दल हुन । रुख छापेहर्ले कलम र हँसिया हथौडामा भोट हल्दैनन् । माथिबाट गठबन्धनका लागि दवाब अायो भने स्वतन्त्र उठेर हामी जिती दिन्छौ । अाअाफ्नो गच्छे अनुसार एक दुईवटा तल्लो पदमा बस्न राजी भएमा गठबन्धन प्रति विचार गर्न सकिन्छ । तर पनि कम्युनिष्टलाई भोट भने हालिदैन । न दर्शन मिल्छ, न सिध्दान्त मिल्छ, न विचार मिल्छ, न ब्यवाहार मिल्छ, नत विश्वास नै गर्न सकिन्छ । यस्तालाई भोट हालेर कांग्रेसका मतदाता बिटुलो बन्नेवाला छैनन् ।
तँ सन्केर नबोल भिरघरे ! माथिको अादेस अाएपछि तँ जस्ता कांग्रेसीले `निउरमुन्टी न´ भएर थपक्क हँसिया हथौडामा भोट हाल्नुपर्छ । चितवन र पोखराका कांग्रेसीहर्ले हँसिया हथौडा र कलममा भोट नहाल्ने निधो गरे भन्दैमा अन्त पनि त्यस्तै हुन्छ भन्ने नठान । यो गाउँ पालिकाको अध्यक्ष मै हुन्छु । अहिले यो गाउँमा माअोवादी केन्द्रको म एक्लै छु । चुनाउ जितेर अध्यक्ष भै सकेपछि सप्पै माअोवादीतिरै अाम्छन् । दुनियाँ मेरो पछाडि हिड्न बाध्य हुन्छन् । तँ जस्ताले भोट नहाली सुखै छैन्।
कसलाई भोट नहाली सुखै छैन भन्छौ बुढा ! चुनाउको दिन सप्पै मतदाताले लाइन लागेर अाफ्नो पार्टीको चुनाउ चिन्हमा भोट हाल्छन् । तिमीले भन्नै पर्दैन ।
यो झुम्री पनि नबुझी बोल्छे ! हामी गर्छौ अाग्राको कुरो, उ गर्छे गाग्रा कुरो । गठबन्धन भएपछि यो गाउँका सप्पैले मलाई भोट दिनु परेन त !
सुन्यौ झुम्री काकी यिन्का निहुँ खोज्ने कुरो ! होइन यो गाउँमा यी बाहेक यिन्को पार्टी माअोवादीको एकजना पनि मान्छे छैन् । टिकसको अाश भने यिन्ले गरेकाछन् । अनि कसरी हुन्छ गठबन्धन ? हेर काका ! भिरघरेले निहुँ खोज्यो भनौला म चाहिँ `ल्किएर´ भन्छु गठबन्धन सठबन्धन म चाहिँ मान्दिन । हुनसक्छ कांग्रेस कमजोर भएको ठाममा कतै कतै गठबन्धन होला । तर, सबैतिर गठबन्धन हुन्छ भन्ने नसोचे हुन्छ । पोखरामा कांग्रेस हराउने तिमारू नै हौ ।भरतपुरमा मतपत्र चबाउने र च्यात्ने गरेर चुनाउ जित्ने तिमारू नै हौ । कांग्रेसलाई धोका दिएर प्रतिनिधिसभाको चुनाउमा एमालेसँग मिल्ने तिमारू नै हौ । कांग्रेसले अब पनि तिमार्को विश्वास गर्छ भन्ने नसोचे हुन्छ । हो भरतपुरमा कांग्रेसलाई मेयर दिएर माअोवादीले उपमेयरमा चित्त बुझाउने हो भने गठबन्धन हुन सक्ला नत्र अन्त गठबन्धन सठबन्धन हुदैन ।
यो भिरघरे मुलाङ मेरो कन्सिरी तात्ने कुरो गर्छ ! केन्द्रले नै निर्णय गरेर पठाएपछि जिल्लाका कांग्रेसले हामीलाई मसान मुन्साय जस्तो पन्छाउन मिल्छ ? यस्तो वाइयात र पुङमाङे कुरा गर्दै नहिन । देउवाले बोलेपछि सकियो । यस्तो ठूलो राष्ट्रिय विषयमा जिल्लाको नेताले प्वाक्क बोल्नु हुदैन ।
लु तिम्रो झारिखण्डे कुरो लगेर हाम्रो कर्णालीमा बगाई देउ काका ! चुनाउ पछि प्रचन्न र माधवको पार्टीको गति सुखा यामको विरिङ खोला जस्तो हुन्छ । जस्ले पनि नागेर तर्ने । अहिले बर्खाको बिरिङ जस्तो नउर्लिए हुन्छ । चुनाउको नतिजा पछि तिमारूलाई नेपाली जनताले डाँडो कटाउछन् । लौ हिड सण्डे जाउ फुटानी चोकतिर । यस्तो तैलाङ्गे गफ सुनेर बस्नु हुदैन ।
लु जै नेपाल !